गर्भवती महिलालाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ? – aajnepal
HomeNewsगर्भवती महिलालाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ?
यौन सम्पर्क भन्ने कुरा प्राकृतिक कुरा हो, त्यस्तै गर्भावती हुनु पनि प्राकृतिक कुरा हो, त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक कुरा भएकोले दुबैलाई सँगै मिलाएर लान सकिन्छ । लगातार यौन सम्पर्क गरीरहँदा जब महिनावारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०र१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा गर्भ रहेको जानकारी पाइन्छ । लगातार यौनसम्पर्क गर्दा गर्भपतन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक भएकाले गर्भ अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा ब्लिडिङ हुन्छ र ?
ब्लिडिङहुने कारण भनेको गर्भरहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुने कुरा हो । यो गर्भावस्थाको सबैभन्दा जोखिम पुर्ण अवस्था हो । यदि पटक पटक ब्लिडिङ हुने, गर्भपटन हुने महिलाहरुले यौन सम्पर्कमा केहि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर यौन सम्पर्क गरेकै कारण ब्लिडिङ हुने भन्नेहुँदैन ।
छिनछिनमा लगातार हाई आउने समस्या छ भने थाहा पाउनुहोस यस्ता घातक रोगको सकेंत
भैंसी हेरेर एउटा जीवले भन्छ– “मरेदेखि खान्थें” तर हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो !